Sheekada filimka LoveYatri: Dhalinyarada cusub Aayush Sharma iyo Warina Hussain jaceyl xiiso leh ayay la imaadeen – Filimside.net
October 5, 2018 Zakarie Abdi
Gobolka Gujarat waa goob ay jecel yihiin Bollywood-ka inay aflaan ku sameeyaan madaama halkaas dhaqan adag iyo Dance cayaareed u gaar ah dadkaas lagu yaqaano. Filimada dhawaanahan Gujarat sheeko ahaan ku saleesnaayeen waxaa ka mid ah KAI PO CHE , RAEES  iyo MITRON .
Haatana liiskaas waxaa ku biiray filimka LOVEYATRI oo isagana ah sheeko jaceyl oo dhaqanka Gujarat xambaarsan sidoo kalena heeso wacan leh mashruucaan.
Jilaayaasha Filimkan: Aayush Sharma, Warina Hussain, Ronit Roy iyo Ram Kapoor.
Director: Niren Bhatt
Qiimeynta sheekada filimkan: 3/5 (Sedex xidig)
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay Filimkan: Sheeko jaceyl oo qof walbo fahmi karo, heesihiisa wacan iyo bandhiga jilaayaasha fanka ku cusub.
Muxuu Ku Liitaa Filimkan: Sheekadiisa ma ahan mid adag, mararka qaar sheeko ahaan wuxuu u egyahay aflaanta jaceylka iyo arimaha qoyska horey Bolywood-ka usoo sameeyeen.
Fariinka Filimka LOVEYATRI Oo Kooban: Filimkan wuxuu ka hadlaa sheeko jaceyl oo xiiso leh taasi oo Gujarat ku dhex mareyso lamaane dhalinyar oo 9-maalmood kaliya isla joogayaan. Sushrut aka Susu (Aayush Sharma) waa wiil qalbi wanaagsan balse aan camal weynin heynin wuxuuna dagan yahay xaafada Vadodara ee Gujarat ka tirsan.
Susu waa wiil waxbarashada ku liito balse wuxuu ku wanaagsan yahay caruurta inuu baro cayaarta dhaqanka ee Garba loo yaqaan sidoo kalena wuu iska qalbi furan yahay.
Dhinaca kale Manisha aka Michelle (Warina Hussain) waa gabbar reer London ah balse dib ugu soo laabatay xaafada Vadodara ee Gujarat ka tirsan oo ay asal ahaan kasoo jeedo waxayna iyada iyo aabaheed Sameer aka Sam Patel (Ronit Roy) dib ugu soo laabanayaan Gujarat si ay xaflada dhaqanka sanadlaha Navratri ka qayb galaan.
Manisha xaflada dhaqanka ayay saaxiibadeeda iyo qoyskeeda kala qayb galeysaa waxayna halkaas isku baranayaan Susu (Aayush Sharma) isagana wuxuu geesninimo ka helaa wiilka ay ilmo habreeda yihiin Rasik (Ram Kapoor) oo ku qal qaalinayo gabadhaan qurbo joogto ah inuu shukaansado.
Susu gabadha wuu ka helaa sidoo kale Manisha iyadana wey ka heleysaa wiilkaan fur furan oo Gujarat kusoo dhaweeyay. Balse Manisha aabaheed Sam Patel (Ronit Roy) ayaa sheekadan jaceylka bilaawga ah ogaanayo wuxuuna isku dayaa inuu bur buriyo ayadoon cidna ogaanin jaceylkaan.
Dhinaca kale Susu wuxuu la dagaalaa Manisha, laakiin Susu qaladkiisa marka uu ogaado inuu Manisha ka gar darnaa waaba Manisha xili ay London dib ugu laabatay oo ah sidii uu aabaheed rabay inuu lamaanahan dhalinta yar kala geeyo!
Haddaba qaybaha dambe filimkan waxaa loo daawan doonaa sida Susu jaceylkiisa u baadi goobayo inuu dib ula midoobo qaladkiisa qirto kadibna aabaheed diidan is fahankooda inuu wax walbo ka dhaadhacsiiyo ama uu kabsado.
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka LOVEYATRI: Director Niren Bhatt wuxuu doortay sheeko aad loo fahmi karo oo sahlan sidoo kalena hanaanka caadiga ah ayuu raacay wuxuuna ku amaanan yahay fariinta uu doortay iyo sida uu isugu daba riday ayadoo leh xiiso gaar ah waana mid ka mid ah filimada jaceylka sahlan ee sanadkan Bollywood-ka sameeyeen aadna loogu raaxeesan karo daawashadiisa.
Bandhiga Jilaayaasha: Ayush Sharma uma eko shaqsi shaashada ku cusub wuxuu la yimid bandhig kalsooni ka muuqato Dance-giisa cajiibka badan waa qasab inu taageerayaal badan kusoo jiito waana hubaal wiilkan inuu aqoonsi heli doono haddii uu dadaalkiisa sidaan usii wado.
Warina Hussain waa gabbar qurux badan oo fanka ku cusub iyadana si wacan ayay doorkeeda kaga baxsaday weliba muuqaalada u baahan xanaaqa iyo dareenka murugada si heer sare ayay u matashay.
Inaba caadi ma ahan Ram Kapoor waa ruuxda filimkan si uu u shactireenayo iyo sida uu garab u siinayo Ayush Sharma garab u siinayo waa jilaa xirfadiisa jiliin aad u sareyso.
Ronit Roy doorkiisa aabo waa mid kusi jiidanayo sidoo kalena ku haboon filimkan kana mid ah shaqsiyaadka sheekada xiiso u yeelayo. Sidoo kale Arbaaz Khan (Jignesh) iyo Sohail Khan (Bhavesh) muuqaaladooda martida ah waa mid wacan oo filimka xiiso kale xiiso u yeelayaan.
Gunaanad: LOVEYATRI waa filim jaceyl oo dagan aad kuu sii jiidanayo heesihiisa wacan yihiin sidoo kalena jilaayaasha fanka ku cusub kaalintooda kasoo baxeen waana hubaal dhalinta inay ka heli doonaan mashruucaan inkastoo tiyaatarada lala saaray labo filim oo kale Andhadhun iyo Venom oo tiyaatarada la qeebsanayaan iyo Sui Dhaaga oo todobaadkiisa labaad ku guda jiro isagana tiyaataro ku filan la siiyay.
Fadlan hoos kaga bogo goos gooska filimka LOVEYATRI oo ah filim Salman Khan seedigiisa Ayush Sharma lagu soo caan bixinaayo:
Waxaa Aqrisay 956